Dr. Tint Swe's Writings: Codeine ကိုဒင်း
ဆရာ ကျွန်တော် အသက်က ၃၃ ပါ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်ကစပြီး ကိုဒင်းပါတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို အိပ်ဆေးလိုသုံးရင်း စွဲသလိုဖြစ်နေပါတယ် နောက်ပိုင်း အလုပ်က MC ယူတဲ့အခါ ဆေးခန်းက ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ယူပြီး သောက်ဖြစ်ပါတယ် တခါသောက်ရင် 90ml တဗူးလောက်ကို တလတခါလောက် သောက်ပါတယ် ကိုဒင်းကို စွဲပြီးသောက်ရင် လူကိုဘာဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးအကြောင်းစာတွေ အများကြီးရေးထားတယ်။ တင်တိုင်းမှာ သူခိုးလမ်းပြ၊ ဓါးပြအားပေးလုပ်ရကောင်းလားလို့ လာလာဆုံးမကြတယ်။ အနာသက်သာဆေး ကိုဒင်းကို မြန်မာလို မရေးရသေးပါ။ ဆောရီး။
Codeine isaprescription pain medication used to treat mild to moderate pain. It comes in tablet form and as the main ingredient in prescription-grade cough suppressants. Tylenol 3, another popular pain reliever, is codeine combined with acetaminophen. Codeine is an opiate (sometimes calledanarcotic). Other opiates include oxycodone, heroin and morphine. Street names for codeine include cough syrup, schoolboy, coties and t-three’s.
As an opiate, codeine runsahigh risk of its users developingatolerance and eventuallyadependence on it. Although many people begin using codeine to relievealegitimate condition, it is frequently abused as tolerance develops. Many codeine users begin to turn to the drug to cope with all of their physical pain and eventually their emotional pain as well. If you or someone you care about is struggling withacodeine problem, get help now.
Many people don’t stop at codeine. They try to reachabetter high by mixing it with other substances, including alcohol. Because codeine and alcohol are both central nervous system (CNS) depressants, combining them can lead to dangerous levels of depression in the brain and respiratory system. Learn the criteria of diagnosing codeine addiction today.
Because multiple drugs inauser’s system can change the way treatment is administered, it is important to be honest in discussing all of your addictions withatreatment counselor. No matter what drugs you use, there isatreatment solution for you.
ဘယ်အရာမဆို ကောင်းတယ်၊ အရသာရှိတယ်၊ တခုခုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ အဲတာအားလုံးတိုင်းမှာ ဘေးထွက် သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်။ လူဆိုတာ ကောင်းတာလည်းသာယာတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာလည်း တပ်မက်ကြတယ်။ မှိန်းနေချင်တာ၊ ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိတာ၊ အလုပ်တွေရှိပါရက်ကနဲ့ မလုပ်ချင်တာ၊ ပျော်စရာမဟုတ်ပဲ ပျော်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာ၊ စတာတွေကို ရချင်ကြတယ်။ စမိရာ ကနေ စွဲတယ်။ ဘယ်အရာကိုစွဲစွဲ ဖြတ်ဖို့ခက်တယ်။ ဖြတ်မရတော့သူတွေ တကမ္ဘာလုံးမှာ သန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ ဖြတ်လို့ရသူ လူရည်ချွန်။
ဆေးခြောက်စာရေးတော့ မကောင်းတာချည်းမရေးပါနဲ့ ကောင်းတာလည်း ရေးပါတဲ့။ မရေးပါ။ အပြစ်တင်ချင်တိုင်း တင်ပေတော့။ အဲတာမျိုးကသာ သူခိုးလမ်းပြ၊ ဓါးပြအားပေး။